Wararka Maanta: Isniin, Sept 10, 2018-Qaramada Midoobey oo soo dhaweysay isbadalka dadaallada nabadeed ee Geeska Africa ka hanaqaaday
War saxaafadeed uu soo saaray afhayeen Stephane Dujarric, Guterres wuxuu sheegay in heshiiska ay gaareen afar ka mid ah wasiirrada si ay uga wada shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida gobolka oo tusaale wanaagsan u ah gobolka iyo kuwa ka baxsan.
Waxa uu ku celiyay iney Qaramada Midoobay sii kordhin doonto taageerada wadamada gobolka si loo xoojiyo guulaha “cajiibka ah” ee dhowaanahan.
Natiijada Booqashada Khamiistii, Eritrea iyo Jabuuti ayaa isku raacay in ay caadi u noqdaan xiriirka dib-u-dhiska diblomaasiyadeed kadib,murankii Xuduudaha ee Labada dal ka dhaxeeyay.
Sidoo kale,Soomaaliya iyo Eriteriya ayaa bishii july horaanteedii isku raacay iney soo celiyaan Xiriirkii diblomaasiyaeed.
Dhanka kale,Urur Goboleedka IGAD,ayaa soo dhoweeyay horumarada siyaasadeed ee dhowaan ka hana qaaday Gobolka Geeska Afrika,gaar ahaan Heshiiskii wadajirka ahaa ee u dhaxeeyay Ethiopia,Eriteriya iyo Soomaaliya.
Sidoo kale,Urur Goboleedka IGAD,ayaa soo dhoweeyay ka qeyb qaadashada wax ku oolka ah ee ku aadan caadi noqoshada xririirka Jabuuti iyo Eriteriya.
“ Horumaradan oo dhan waxay dhacayaan xilli isbedel wanaagsan uu ka jiro Gobolka oo dhan,” ayaa lagu yiri warbixinta IGAD.waxaana lagu ammaanay hoggaanka iyo aragtida Gobolka.